Izindaba - Yini i-afterglow Photoluminescent pigment ende?
Ebizwa nangokuthi: glow ku-powder emnyama, i-luminescent pigment, i-fluorescent powder
Umbala wethu wesikhathi eside ngemuva kokukhanya kwesithombe-luminescent yi-strontium aluminate based luminous powderingakhipha ukukhanya ngokufaka amalambu ahlukahlukene abonakalayo futhi ingasetshenziswa kaningi. Imikhiqizo ayiqukethe noma yiziphi izinto ezifaka imisebe futhi ingasatshalaliswa ngokulinganayo njengesengezo phakathi kwama-ejenti asobala njengokuhlanganiswa, inki, upende, amapulasitiki, okusanhlamvu, ingilazi, i-fiber ukwenza imisebenzi yokuphuma yama-ejenti.
SrMgAl4O8: Eu2 + Dy3 +, Sr2MgSi2O7: Sr4Al4O25: Eu, Dy njll.
Ubuningi bombala okhazimulayo: ophuzi-oluhlaza okotshani, okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuhlaza okotshani njll.
Uhlobo lwethu lwamanje oludumile lwe
Ukukhanya（mcd / m2）
Luhlaza okwesibhakabhaka I-RBT-20 '
Isikhathi sokuthumela: Jul-10-2020